တရုတ်အရည်အသွေးမြင့်ရော်ဘာစီခြယ်မှုန့်စုပ်စက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Depump Technology
MAH စီးရီး centrifugal slurry pump များသည် cantilevered, horizontal, slurry pump များဖြစ်သည်။
၁။ ရော်ဘာစီစီထားသော Slurry Pumps သည်သတ္တု၊ သတ္တုတွင်း၊ ကျောက်မီးသွေး၊ စွမ်းအင်၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းဌာနများ၌အလွန်အမင်းပွန်းစားခြင်း၊
2. ဤအမျိုးအစား၏ပန့်များကိုလည်း multistage စီးရီးတွင်တပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
၃။ အမျိုးအစား MAH centrifugal slurry pump များအတွက်အစားထိုးခံနိုင်ရည်ရှိသောသတ္တုအကန့်များသို့မဟုတ်ရာဘာအပြားများရှိသည်။
၅။ HH စုပ်စက်အတွက် frame plate liner နှင့် impeller များသည်ခံနိုင်ရည်ရှိသောသတ္တုဖြင့်သာအသုံးပြုသည်။
၆။ NH centrifugal slurry pumps များအတွက်တံဆိပ်တုံးများသည်ဂလင်းတံဆိပ်သို့မဟုတ် expeller တံဆိပ်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
၇။ ဤစီးရီး Pumps များသည်ပွန်းစားခြင်း (သို့) တဖြည်းဖြည်းစားခြင်း၊ တဖြည်းဖြည်းစားခြင်း၊ သွပ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ သတ္တု၊ သတ္တုတွင်း၊ ကျောက်မီးသွေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊
မြင့်မားသောခရုမ်းအလွိုင်း: A05, A07, A49, စသဖြင့်
သဘာဝရော်ဘာ: R08, R26, R33, R55, etc
silicon Carbide ကြွေထည်။
အဓိကအသုံးပြုမှုများမှာအရည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အအေးပေးစနစ်များ၊ စက်မှုသန့်ရှင်းရေးစနစ်များ၊ ငါးမွေးမြူရေးခြံများ၊ ဓာတ်မြေသြဇာစနစ်များ၊
အမှုန့်များပါ ၀ င်သည့်အပင်များကိုအစိုင်အခဲအမှုန်များပါ ၀ င်သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ သတ္တု၊ ကျောက်မီးသွေး၊ အပူစွမ်းအင်စက်ရုံများရှိဟိုက်ဒရောလစ်ပြာများဖယ်ရှားခြင်း၊ သတ္တုထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ကျောက်မီးသွေးအဝတ်လျှော်စက်ရုံများရှိကျောက်မီးသွေး slurry နှင့်အကြီးစားအလတ်စားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစသည်တို့ဖြစ်သည်။ slurry ထဲတွင်နေရာချပြီး pump ကိုစတင်ရန်လိုအပ်သည်။ ရွှံ့စုပ်စက်များနှင့်နစ်မြုပ်ထားသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပန့်များသည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ အလုပ်လုပ်သောအခါမော်တာကိုရေမျက်နှာပြင်အထက်တွင်ထားရန်လိုအပ်ပြီးစုပ်စက်ကိုရေထဲ၌ထားရမည်။ သို့မဟုတ်ပါကမော်တာသည်ရေထဲသို့ကျသွားပြီးမော်တာကိုဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ရှည်လျားသောရိုးတံ၏အရှည်ကိုယေဘုယျအားဖြင့်ပုံသေသတ်မှတ်ထားသဖြင့်ပန့်ကိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းသည်ခက်ခဲသောကြောင့်လျှောက်လွှာတင်သည့်အခါများ၌ကန့်သတ်ချက်များစွာရှိသည်။
ရော်ဘာမြင့်မားသောရွှံ့ကျောက်မီးသွေးသတ္တုရိုင်းလွှဲပြောင်းသဲ slurry စုပ်စက်စီတန်း။
MAH ပန့်များကိုအများအားဖြင့်အသုံးများသော slurry pump ဒီဇိုင်းများနှင့်အပြန်အလှန်ဖလှယ်နိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ရွေးချယ်စရာများစွာပါရှိသည်။ MAH Slurry Pumps သည်တောင်းဆိုမှုအရှိဆုံး slurry pump ကိုအသုံးပြုရာတွင်ကြမ်းတမ်းသောစွမ်းရည်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုပေးသည်။
မြင့်မားသောခရုမ်းအလွိုင်း / Silicon Carbide Ceramic
3Cr13 / ကြွေထည်ခင်း
45 # သံမဏိမီးငြိမ်းသတ်ခြင်းနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန် tempering
မီးခိုးရောင်သံ or Nodular cast iron
ဖောက်သည်၏အထူးလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ OEM ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။
Q1. သင်သည် ANSI နှင့် ASME စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသော pump ကိုသင်ထောက်ပံ့နိုင်ပါသလား။
A.Yes၊ ISO / ASME / ANSI စံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသောကျွန်ုပ်တို့၏စုပ်စက်။
အရည်အသွေးကိုပထမ ဦး ဆုံးမမြင်ဘဲမည်သို့မှာယူရမည်နည်း။
A. အကယ်၍ ၎င်းသည်အမှာစာကြီးကြီးဖြစ်ပါကသင်၏စက်ရုံ၌စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ရန်နမူနာများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။
A. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုသည် ISO 9001 စံနှုန်းအရတင်းကြပ်စွာရှိပြီးစက်ရုံကို ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော် slurry pump နှင့်အစိတ်အပိုင်းများတွင်ရှိသည်။
A. သုံးစွဲသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလျှောက်လွှာအချက်အလက်ပေးပို့နိုင်သည်။ သင့်လျော်သောစုပ်စက်နှင့်တံဆိပ်အမျိုးအစားများကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။
A. ပုံမှန်အားဖြင့် T / T မှ PI အတည်ပြုပြီးသည့်နောက်တွင်ငွေပေးချေမှု ၃၀% ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုမပြုမီငွေပမာဏကိုပေးချေလိမ့်မည်။
မျက်မှောက်မှာ L / C
အဓိကဆောက်လုပ်ရေးအာမခံများအတွက် ၁.၁ နှစ်။
A. ပုံမှန်အားဖြင့် ၂၅ ရက်။ အကယ်၍ ဖောက်သည်သည်အရေးတကြီးလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်အပိုပစ္စည်းအမြောက်အများသိုလှောင်ထားနိုင်ပြီး ၇-၁၅ ရက်အတွင်းအပြီးသတ်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
A. ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကွဲပြားခြားနားသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ - EXW, FOB, CIF ။
ရောင်းအားအတွင်း။ ၎င်းသည်ဖောက်သည်၏အချိန်ကိုသက်သာစေပြီးဆက်သွယ်မှုမြင့်မားသည်။ အရောင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့တွင် NNT ၌ကျွမ်းကျင်ပြီးဖောက်သည်၏မှတ်ချက်များကိုလိုက်နာပြီးကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။ ဖောက်သည်များ၏ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းပြီးဖောက်သည်များကိုအမြတ်အစွန်းထားပါ။
A.Local အေးဂျင့်။ အကယ်၍ စုပ်စက်လည်ပတ်မှုသည် site ပေါ်တွင်ပြသနာရှိပါက client သည်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်သည်စက်ရုံကို ၂၄ နာရီအတွင်းရောက်ရှိလိမ့်မည်။
hot Tags:: ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်း၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထား၊ ရရှိနိုင်သည့်ရော်ဘာစီဒီအမှတ်တံဆိပ်၊ တရုတ်၊ , အရည်အသွေး, အဆင့်မြင့်, နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်း